China China manenjika roller ho an'ny mpamokatra sy mpamatsy kalkera dozer KOMATSU | Jinjia
Single flange, double flange track roller dia mety amin'ny manodidina ny 0,1-120 taonina ny mpitrandraka kely sy ny mpanao «excavator» mavesatra ary «bulldozer». Roller amin'ny tsipika manokana ho an'ny milina fitotoam-bary, pavers, ala sy fampiharana fambolena.
Ny famolavolana tombo-kase fehezan-droa sy ny fanosorana mandritra ny fiainana dia mahatonga ny làlan-kaleha ho fiainana salama sy fampisehoana mahafinaritra.
Kalitao TRACK ROLLER
1. Amin'ny alàlan'ny vatan'ny akorandriaka matevina amin'ny alàlan'ny fanamafisana na fanamafisana ny atiny dia mampitombo ny fanoherana ny akanjo ary miantoka ny tanjaka sy ny fanoherana ny fahasimbana. Ireo tombo-kase dia manome antoka ny fanosorana maharitra maharitra maharitra.
2. Ireo singa ilaina amin'ny kalitao, toy ny hubs, collars, bimetal bushings, shaft, ary tombo-kase avo lenta
3. Famokarana fanodinana forging mafana: fidirana akorandriaka mankany amin'ny fizarana mikoriana tsara ao anatin'ny firafitry ny fibre.
Ny famonoana olona samy hafa na amin'ny alàlan'ny fitsaboana hafanana mafana, ny roller dia misy fiantraikany amin'ny fanoherana ary manana androm-piainana lava kokoa.
4. Sarobidy: kalitaon'ny akorany: 50Mn / 45 # / 40Mn2
Hamafin'ny rindrina ： HRC53-56
Ny halalin'ny quench ：> 7mm
Fitaovana familiana: 45 #
Ny halalin'ny quench ：> 2mm
Fitaovana fantsom-boaloboka ： QT450
5. Fahaiza-mamokatra: 5000pcs / Month. Fananganana orinasa ho an'ny akorandriaka, ary ozinina fanariana vy ho an'ny vozon'akanjoko, fametahana ireo entana vita, mahomby sy avo lenta vokarina.
Torohevitra momba ny fametrahana ny roller vaovao
1. Ny fampifangaroana ireo lozisialy vaovao sy taloha amin'ny sisiny iray ihany dia mety hampihoatra ireo vaovao rehefa mipetraka ambany noho ireo efa tonta izy ireo, noho izany dia maka lanja be loatra.
2. Raha tsy manolo ny roller vaovao rehetra any ambany dia asaina mifanentana amin'ny antsasaky ny tsara kokoa amin'ny lafiny iray ary ny vaovao rehetra amin'ny lafiny iray. Izany dia mitazona hatrany ny tsindry isaky ny roller fa tsy be loatra ny tsirairay.
3. Rehefa manolo roller vaovao, dia aza mivezivezy lavitra nefa tsy ajanony matetika ilay masinina satria afaka mafana be sy misambotra izy ireo. Mijanona isaky ny 4-5 minitra ary mandehana kely amin'ilay lalana mifanohitra amin'izay hanampy amin'ny famoahana ny menaka. Izany dia fitandremana mahazatra mandritra ny 100 ora voalohany
Teo aloha: Track Shoes ho an'ny Crawler Track
Manaraka: mpanamboatra rohy assy komatsu any China
Roller Track roa manidina